Maqaallada Harrison Painter ee Martech Zone |
Maqaallada by Rinjiye Harrison
Xaqiiqda dhabta ah iyo kororka ayaa door weyn ka ciyaari doonta mustaqbalkaaga. TechCrunch waxay saadaalisay in mobilada AR ay u badan tahay inuu noqon doono $ 100 bilyan oo suuq ah 4 sano gudahood! Dhib malahan haddii aad u shaqeysid shirkad tiknoolajiyad goos goos ah, ama qol lagu iibiyo qalabka xafiisyada, meheraddaadu si uun ayey uga faa'iideysan doontaa khibrad suuq-geyn ah. Waa maxay farqiga u dhexeeya VR iyo AR? Xaqiiqda Virtual (VR) waa madadaalo dhijitaal ah oo ka mid ah
3 Sababood oo lagu Kordhiyo Gaaritaanka Suuq-geynta oo Video ah
Isniin, Disembar 5, 2016 Axad, Janaayo 15, 2017 Rinjiye Harrison
Fiidiyowgu waa mid ka mid ah aaladaha ugu suuq geynta badan suuq geyntaada si loo ballaariyo gaadhista suuqgeynta, laakiin badanaa waa la iska indhatiraa, si aan loo adeegsan iyo / ama la fahmin. Su’aal kama taagna in soosaarida waxyaabaha ku jira fiidiyoowga ay cabsi gelinayaan. Qalabka wuu qaali noqon karaa; habka tafatirka waqti-qaadashada, iyo helitaanka kalsoonida kaamirada horteeda had iyo jeer ma sahlana. Nasiib wanaag waxaan haysannaa fursado badan oo maanta la heli karo si looga caawiyo ka-gudubka caqabadahaas. Taleefannada casriga ah ee ugu cusub waxay bixiyaan fiidiyowga 4K, tifaftirka